Sakhiwo secondary education amakhono namuhla linendima ebalulekile ukuqeqesha izisebenzi ezinekhono kakhulu.
Nsuku zonke isidingo esikhulayo ukuze odokotela. Nokho, ukuthuthukiswa umnotho kanye ukukhiqizwa njalo kwenza kwaba nesidingo esikhulu bomsebenzi wabo futhi ngekhono ezingeni.
Ukushoda ukuzibonakalisa ukusebenza kwandisa nentshisekelo yesibili sokufundela imfundo ochwepheshe. Tikhundla ngaphambilini abaqondanga ophambili manje ngokuya ukudleka emakethe yezabasebenzi. ukuqeqeshwa Umbuzo kulezi zindawo iba efanele. Kule ndaba, zemfundo ezikhethekile ehilelekile ekuqeqesheni abaphathi maphakathi (amakolishi), qhubeka anesikhundla oqinile Russian wehlelo lefundo zombelele.
Izikhungo zomphakathi we secondary education amakhono kwenziwe kuze kube manje ukuqeqeshwa zochwepheshe ezahlukene 280. Nge ukuthuthukiswa kanye ukuguqulwa ukukhiqizwa kulolu hlu ukhula njalo futhi elandayo.
imfundo professional Secondary ezingase zithathwe ngezigaba ezimbili. Ukunikeza izinga sokuqala sezihambile.
Namuhla e-Russia kukhona izinhlobo ezimbili izikhungo zemfundo ukuthi ukuqeqesha Ochwepheshe emkhakheni zokuba umuntu aqeqeshelwe amakhono ka esigabeni sesibili:
College - uhlobo eyinhloko wezemfundo, lapho abafundi babe nethuba lokuthola yesibili imfundo eyisisekelo amakhono;
College - aphakeme amazinga isikhungo lapho imfundiso izinhlelo olunzulu (kungenziwa subordinated division enyuvesi noma owamisa isiphi isakhiwo ezimele).
Kokuqala education amakhono, esikhundleni salokho, ingatholakala ezikoleni zamabanga aphakeme nezikole sokufundela (PTU). Lezi zikhungo babe base ahlukahlukene emfundo.
Isikole esifundisa amakhono lihlukile esikoleni ezingeni eliphakeme ukulungiselela umfundi.
Ekupheleni semfundo nge e-ukujula nokufundisa abafundi baklonyeliswa ziqu "Uchwepheshe", abafundi lyceums nasemakolishi - ". Uchwepheshe entry level"
Isilinganiso ezingeni kokuqala imfundo professional
izikhungo yesibili sokufundela emkhakheni ukuqeqeshwa kokuqala zihlanganisa ezikhethekile etikolweni letiphakeme nasemakolishi.
Inombolo yezikolo nge imfundo eyisisekelo ezweni lethu imayelana million 4 namuhla. Bavakashelwa ezingaphezu kuka-1.5 million abantu abasha.
Izakhamizi ukuthola professional imfundo yamabanga aphansi, ilungelo ukuze uqhubeke ukuqeqeshwa umsebenzi e SSUZ aphakeme amazinga izinhlelo esincishisiwe.
Futhi, uma kunesidingo, abafundi bangathola isitifiketi jikelele imfundo yesibili. Ukuze wenze lokhu, kudlule ukuhlolwa isimo ngesisekelo okuyinto idokhumenti efanele.
I iziqu secondary education amakhono Ukungena-level, banelungelo ukuqhubeka nge-career kwi- amakolishi zezemfundo, amakolishi kanye amanyuvesi.
imfundo professional Secondary iyokhushulwa
Ubani ufisa ukuthola imfundo yesibili amazinga anda kufanele ukhethe yokwamukelwa akuyona esikoleni esiphakeme, hhayi amakhono, kanye ekolishi noma esikoleni lobuchwepheshe.
ERussia kukhona angaphezu kuka-2,5 ayizinkulungwane amakolishi nge Ukulifunda ngijule, okuyinto edonsela abafundi abangaphezu kwezigidi ezingu-2.3.
Amazinga aphakeme yesibili ezikhethekile ezikhungweni zemfundo etholwe ngokwethula emazinga emfundvo izinhlelo ezengeziwe:
e-sifunde sijule ezihlokweni ezithile eziqondile futhi eyala;
ukuthola okukhethekile eyengeziwe ehambisana primary.
Imfundo e ephezulu ezingeni SSUZ eduze eyunivesithi. Abafundi lapha ekilasini amahora angaphezu kwezikhala imfundo yamabanga aphansi, izivivinyo kanye ukuhlolwa, bhala amaphepha okuhlolwa anemibuzo dissertation.
Ngokwesibonelo, abafundi abakhethe Ukwakhiwa College, kanye nabantu abathweswe iziqu esikoleni esiphakeme luhamba luye ohlangothini olulodwa kumelwe uthathe kanye nokuvikela amaphrojekthi ziqu mqondo ezihlobene izihloko ezikhethekile. Okuwukuphela umehluko - izimfuneko aphansi abafundi amakolishi. Ngakho-ke, izikole zamabanga zezinga eliphezulu angabhekwa ezisezingeni eliphansi ephakeme imfundo professional.
Ngokuvamile, ekolishi kuyisimo iziqephu isakhi University, futhi ngaphansi kokuqondisa sikhungo. Abafundi uhlela ukuqhubeka nezifundo zabo zemfundo ephakeme, kufanele sinake leli qiniso. Ukuba abathweswe iziqu iziqu zasekolishi enjalo unelungelo lokuthola imfundo ekhethekile e-University of izinhlelo encishisiwe. Lokhu kuyinzuzo enkulu, njengoba kuvumela ukunciphisa isikhathi sesifundo somuntu eyunivesithi, kanye ukuhlanganisa umsebenzi nokutadisha.
Colleges angase ukubhalisa abantu abaye bathola eziyisisekelo jikelele noma secondary education jikelele. Le nto ingenye nezidingo eziyisisekelo.
Abafakizicelo izikhungo zemfundo aphansi education amakhono kukhona sokuthola ngokuthatha saziso yokungena ezivivinyweni. Ukuze Bantu babhalisele kumelwe athumele madokumende alandelayo:
idokhumenti yokuqala wezemfundo yezikole (amamaki 9 noma 11);
4 izithombe (3 x 4);
amakhophi passport kanye nezitifiketi zokuzalwa;
isitatimende ziqondiswe umqondisi sokungena.
Kwezinye izimo, lapho isicelo emkhakheni othile education amakhono, uma kunesidingo, ngokubona lesikhungo eyenziwa enengxoxo ikhandidethi. Abangenayo kungadingeka ukuba ibhekane ebhaliwe ukuhlolwa ukufaneleka kanye nolwazi izifundo esikoleni. izimangalo ezinjalo zingase okwethulwa kunjalo, uma inani labo abafisa ukufunda okwengeziwe kwenani lama isabelomali izindawo kulesi okukhethekile. Kulesi simo, umncintiswano kusekelwe amaphuzu isilinganiso isitifiketi wadlula imiphumela yokuhlolwa.
Ukwamukelwa secondary education amakhono anda izikhungo ezingeni nsuku yokuncintisana ngesisekelo yokungena izivivinyo.
Enye yezimfuneko zokusinda eziyisisekelo ukuba izikole zamabanga sokufundela ilayisensi. Ngakho-ke, ngaphambi kokufaka isicelo zombili nezikhungo zomphakathi kanye commercial kumele baqinisekise ukuthi isikhungo linedokodo olufanele isikhathi samanje ubuqiniso.
Abafundi abadinga izindlu esikhathini yokutadisha, unikezwe ehostela.
Out of the mncintiswano elandelayo imikhakha izakhamuzi babhaliswa emakolishi:
izintandane nezingane kwesokunxele ngaphandle ukunakekelwa kwabazali;
abantu nezinye izigaba, okukhethekile supply ehlinzekwe nguhulumeni.
With ukuthuthukiswa yesimanje ulwazi ubuchwepheshe e inqubo zokugcwalisa izikole zamabanga sokufundela beshintsha futhi lula. izikhungo Abaningi ngenkuthalo esetshenziselwa irisidi kwezicelo inthanethi ubuchwepheshe. amaphrofayli yakha kubekeka website esemthethweni ye-isikhungo sakho semfundo.
Le ndlela elula futhi abafundi, futhi amalungu ekomidi Ukukhetha. Ukuze isicelo, kufanele ugcwalise ifomu kwi-website ye-sikhungo. Isinqumo iqhaza emncintiswaneni esithathwayo ukude. Imibhalo Original umfakisicelo ngemva isixazululo omuhle. Kuze kube kuleli qophelo khona kwakhe siqu akudingekile.
Umumo nobude ukuqeqeshwa
imfundo Vocational ingathola amafomu alandelayo ka imfundo:
Umnqamulajuqu kokuthola ukuqeqeshwa kokuqala sokufundela of eminyakeni emibili kuya kwemithathu ngesisekelo amakilasi ayisishiyagalolunye nokukodwa esingaba iminyaka emibili ngemva amakilasi nanye. Izinsuku encike ngqo kwi lesikhungo kanye okukhethekile abakhethiwe.
Isikhathi secondary education amakhono matasa ngokwengeziwe ngokomoya njengoba kunqunywa ezingeni kulungiselelwa abafundi. Ukuze amakilasi ayisishiyagalolunye wathola emva kuba emithathu kuya kwemine. Ngesisekelo amakilasi nanye - kusukela kwabaneminyaka engamashumi amabili kuya kwamathathu.
izikhungo zemfundo Unelungelo setha eqale usuku kokuthola imibhalo. Ngokuvamile, le khomishana iqala ngo-June, ngemuva kokuphela uhlolo lokugcina (kodwa hhayi emva kuka ngosuku 20th), futhi wamukela izinhlelo kuze kube sekupheleni kuka-August (kodwa hhayi emva kuka-26).
Kumele kukhunjulwe ukuthi umnqamulajuqu esigcwele futhi itoho, isabelomali kanye inkontileka izinhlobo ukuqeqeshwa ziyahlukahluka.
Ngokuvamile, izindinganiso ukuqeqeshwa isilinganiso sokufundela libe izingxenye ezimbili. Eyokuqala - uhlelo federal, evunywe i-Ministry of Education. Unyaka ngamunye, le dokhumenti ingashintshwa. amazinga ajwayelekile kanye nezidingo yokutholwa maqondana amakolishi, izikhungo kumele uthobele yonke imikhakha secondary education amakhono.
Esesibili - uhlelo sivunyiwe ezingeni lesifunda. Ngakho-ke, abantu esibafundelayo ezikhungweni zemfundo yohlobo olufanayo, angahlola izinto ezahlukene futhi abe inombolo ehlukile ekilasi amahora.
Izinhlelo lemfundo yesibili professional ezingeni eliphezulu vumela ukuthola amakhono ezengeziwe isabelomali noma Imali ngesisekelo.
Ngemva kokuphothula, abafundi ziyadingeka khona isitifiketi isimo. Ngemva kokuphothula abafundi baklonyeliswa ziqu. Uma omubi, umfundi uthola isitifiketi kokuqeqeshwa esikhungweni, ekhombisa isikhathi kanye nenombolo ye ekilasini amahora.
Abantu abangazange lidlule isitifiketi sokugcina, unelungelo lokuthathwa njengomsulwa balidlulisele ngonyaka ozayo.
Abafundi ukuthatha education amakhono, banelungelo latawufundziswa ezikhungweni zemfundo mahhala.
Iziqu lesikhungo, ukuthola entry level idiploma bese sinquma ukuqhubeka nomsebenzi wabo zemfundo emakolishi noma ezikoleni lobuchwepheshe futhi ungase ufanelekele nokuxhaswa komphakathi.
Ukuthola imfundo yesibili ezikoleni zamabanga sokufundela we elifanayo - nje ukukhokha.
Ngaphezu kwalokho, amakholiji, izikole lobuchwepheshe, izikole eziphakeme kanye nezikole amakhono eMoscow, eSt Petersburg nakwamanye amadolobha Russian akunika ithuba ungenwa ukuqeqeshwa nsuku kwezohwebo.
Abafundi ukutadisha ngebhajethi, uthole umfundaze ngendlela ebekiwe.
Amakhono ka secondary education amakhono
Kulabo unquma uthole zezenhlalakahle noma imfundo lobuchwepheshe, okukhethekile, uhlu okuyinto evunywe i-Ministry of Education zezemfundo, kusinike ithuba ifunde uhlobo oluthile lomsebenzi ehloniphekile.
izikhungo Secondary zemfundo sokufundela ukunikeza uqeqesho ezindaweni ezilandelayo:
ezolimo kanye izindawo zokudoba;
Ihhotela kanye yokudlela amasevisi;
imithi kanye nezempilo;
amafutha kanye umkhakha weze-energy;
Ukudla, iziphuzo kanye nemikhiqizo kagwayi;
womshini lesikhumba izimpahla, izicathulo;
uginindela nephepha umkhakha;
ukushicilela kanye yokunyathelisa, imikhiqizo ephrintiwe;
ukukhiqizwa uwoyela, igesi kanye nezimboni zasemkhathini;
akhiqize amathuluzi kagesi nawe-optical;
womshini imikhiqizo injoloba kanye plastic;
ukuhweba (lwezeMpilo Usizo);
imisebenzi zemfundo kanye nokufundisa;
ezomnotho kanye nokuphathwa;
nokuphathwa kokusetshenziswa komhlaba kanye geodesy;
Geology nokumbiwa izinsiza;
izindiza kanye missile nesikhala ubuchwepheshe;
nokuvikelwa kwemvelo nokuphepha ukuphila.
izikole lunye zivame ezihlobene izici zesifunda, imininingwane yalolu umnotho kanye ukukhiqizwa kusifunda esinikeziwe. Ngenhloso ukuqeqesha izisebenzi eziqeqeshiwe futhi siyiswa izikole proforientirovanie.
esikoleni sokufundela, esikolweni lobuchwepheshe noma ekolishi - lokho ukukhetha?
Kukhethwa isikhungo incike izinhlelo zakho.
Uma ngemva kokuthweswa iziqu ufuna abe umfundi we nyuvesi, ekolishi ezifanele kakhulu nge ukuqeqeshwa kule okukhethekile (isib, ukulaliswa esibhedlela kamuva.-University of nobuNjiniyera Ukwakhiwa College iwukukhetha; ukuqhubeka ukufunda nabezokwelapha - Medical College, nokunye).
Ukusebenza okukhethekile neziqu uzothola esikoleni ezikhethekile lobuchwepheshe.
Ngo SSUZ amazinga ephakeme nazo ehilelekile ekuqeqesheni ukudedelwa isilinganiso umsebenzi bokusungula - Accountants, othisha ezikoleni zamabanga aphansi naphezulu, abacubunguli mabhuku, kanye nezifundiswa nezinye izinkomba eziningi.
Uma ufuna ngokushesha uthole okukhethekile, lesikahle kuyoba sokufundela imfundo yamabanga aphansi ezingeni.
Icubungula - kuyinto ... RNA ukucutshungulwa (post-transcriptional RNA ukuguqulwa)
Kuyathakazelisa ukuthi nakuba abanye kolwandle e Cyprus?
Haircut "ikhasi" - njalo isifazane, imfashini, stylish
Uba kanjani wokuzithandela Winter Olympic ngo Sochi
Sandwich nge izinhlanzi obomvu. Amnandi Futhi kulula
Imvumelwano Okungenzeka igama elithi "zangaphambili"
Mayelana abantu abangathandi abantu. Igama elithi "misanthrope"
Inkukhu a sauce cream multivarka: ukuhlukahluka eziningana izitsha
Kungenzeka yini ukushayela i-Miramistin ekhaleni nezingane? Izincomo zodokotela
Indela Shaolin: Ubuciko Ukulwa